महिनामै अर्बौंको धान आयात, राइस मिलको शुल्क प्रमुख कारणः कृषि मन्त्री « Sahakari Nepal
महिनामै अर्बौंको धान आयात, राइस मिलको शुल्क प्रमुख कारणः कृषि मन्त्री
प्रकाशित मिति : 29 June, 2015 12:19 pm
सात वर्षअघि निर्यात हुने धान अहिले तीव्र रुपमा आयात बढिरहेको छ । धान विज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्ने धानलाई सरकारी प्राथमिकता नपुगेको हुँदा यसको उत्पादन कम भएको बताउँछन् । विज्ञहरुले निकालेको प्रविधि आम किसानमाझ प्रसार नपुगेको उनको भनाइ छ । हामीले जानेको, सिकेको प्रविधि दराजमै छ, उनले दुखेसो गरे । उनी लामो समय कृषि अनुसन्धान परिषदमा धान विज्ञको रुपमा कार्यरत थिए ।
मौसम परिवर्तनको कारण धान उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको उनले बताए । खडेरी, अति वर्षा सहनसक्ने, हाइब्रिड धानजस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो । तर, मेहनत ग¥यो, किसानलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गराउन बीऊ दिन सक्दैनौं, उनले थपे ।
हाल नेपालमा प्रति हेक्टर ३.२ टन धान उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले भने यसलाई बढाएर ३.५ प्रति हेक्टर मात्र गरेपनि धान आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
जमीन खण्डीकरणको कारण पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । भू उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो उनले औंल्याए । त्यसो त, नेपालमा मल प्रयोग दर कमी, सिंचाइ अभावले पनि धान उत्पादन कम भएको उनले बताए । ३७६ कृषि सेवा केन्द्र र २० प्रतिशत सिंचाइ सुविधायुक्त जमीनबाट कसरी उच्च उत्पादन लिन सक्छौं ? उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले सुनाएको आगामी रणनीतिमा कृषि मन्त्री पराजुलीले अझ व्याख्या गरे । हामी आगामी तीन वर्षमा दूधमा, ५ वर्षमा मासुजन्य र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । आगामी १० वर्षमा हामी पूर्ण रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछौं, उनले थपे ।